LinkedIn: လိုက်နာရန်ထိပ်တန်းလူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူ ၂၅ | Martech Zone
LinkedIn: လိုက်နာရန်ထိပ်တန်းလူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူ ၂၅
တနင်္လာနေ့, ဇန်နဝါရီလ 27, 2014 တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 15, 2017 Douglas Karr
Jason Miller မကြာသေးမီကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်မှာသူသည်နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုနောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လွှင့်သောအခါသူမွေးဖွားသည်ဟုခံစားမိကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည်ဤသူငယ်အတွက်ဂုဏ်ယူမည်မှာသေချာသည် The LinkedIn မှခေတ်မီ Marketer ရဲ့လမ်းညွှန် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ အရောင်အသွေးစုံလင်ပြီးစျေးကွက်ပညာရှင်အမျိုးမျိုးတို့၏အကြံဥာဏ်များ၊ အမျိုးမျိုးသောအသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များနှင့်အရင်းအမြစ်များစွာနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သင်မကူးယူရသေးပါကသင်၏စီးပွားရေးကွန်ယက်ကို LinkedIn တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးရန်စာရင်းအဖြစ်အသုံးပြုပါ။
ဤလမ်းညွှန်သည်သင့်အားစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးစျေးဝယ်တတ်သူဖြစ်သည်။ သင်၏လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ကိုနောက်တစ်ဆင့်သို့တက်ရန်အသင့်ပြင်ထားပါ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေးအခေါ်နှင့်ထိတွေ့ပါ အသိအမြင်တိုးပွားစေခြင်း၊ အမြင်သြဇာလွှမ်းမိုးခြင်း၊ ဦး ဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင် LinkedIn နှင့်ဝင်ငွေတိုးပွားလာခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ eBook အသစ်ကို download လုပ်ပါ သင်ယူပါ
သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဘာကြောင့် LinkedIn ကိုစျေးကွက်တင်ရန်လိုအပ်သည်
သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကိုမောင်းနှင်နိုင်ရန်အတွက် LinkedIn ၏အစွမ်းထက်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဖြေရှင်းနည်းများကိုမည်သို့အသုံးပြုမည်နည်း
သင့်ရဲ့လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့ဖို့ဘယ်လို အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး သက်ဆိုင်ရာနှင့်ပစ်မှတ်ထားအကြောင်းအရာများကိုကမ္ဘာ့ပညာရှင်များနှင့်မျှဝေခြင်းအားဖြင့်
ကြွယ်ဝသော display ads နှင့်မြင့်မားသောပစ်မှတ်ထားသောစာသားကြော်ငြာများဖြင့်စီးပွားရေးပညာရှင်များနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်နည်း
ဂျေးဗာ - ဥက္ကaker္ဌ၊ စာရေးသူ၊ ဘလော့ဂ်ဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ စည်းရုံးသိမ်းသွင်း။ တွစ်တာ: @jaybaer LinkedIn တို့
Michael Brenner - အကြီးတန်းဒါရိုက်တာ၊ SAP မှ Global Marketing၊ သမ္မတနှင့်ပူးတွဲတည်ထောင်သူ
ဘလော့နှင့် Business2Community ၏ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွင်း။ တွစ်တာ: @BrennerMichael LinkedIn တို့.
Michael Brito - WCO မှဘလော့ဂ်တင်သောကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု ဗြိတိသျှ။ တွစ်တာ: @Britopian LinkedIn တို့.
ဂျက်ဖ် Bullas - အတိုင်ပင်ခံ၊ နာယက၊ ဘလော့ဂါ။ တွစ်တာ: @jeffbullas
ဘရိုင်ယန် Carter က - Infinigraph တွင် Marketing ၏ VP၊ စာရေးသူ၊ စပီကာ။ တွစ်တာ: @briancarter LinkedIn တို့.
Brian Clark၊ တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Copyblogger။ တွစ်တာ: @copyblogger LinkedIn တို့.
ဟိုင်ဒီ Cohen - ဆောင်းပါးရှင်။ တွစ်တာ: @heidicohen linkedin.
စတီဗင် Farnsworth - Jolt မှဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဗျူဟာချုပ်၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်၊ စာရေးသူ၊ စပီကာ။ တွစ်တာ: @steveology linkedin.
Barry Feldman - Feldman Creative, Speaker ပိုင်ရှင်။ တွစ်တာ: @FeldmanCreative linkedin.
အမ်း Handley - မှာအကြောင်းအရာ၏ ဦး ခေါင်း စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပါမောက္ခများ, စာရေးသူ။ တွစ်တာ: @annhandley LinkedIn တို့.
Matt Heinz - Heinz Marketing Inc. မှဥက္ကPresident္ဌ Twitter - @HeinzMarketing
Douglas Karr - စီအီးအို DK New Media, မှာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ် ဆပ်, စာရေးသူ။ @douglaskarr LinkedIn တို့
Jason Keath - Social Fresh ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်။ @jasonkeath LinkedIn တို့
Nichole Kelly - အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် လူမှုမီဒီယာ Explorer ကို, အသေးစားနှင့်အလတ်စားဒစ်ဂျစ်တယ်စာရေးသူ၊ @Nichole_Kelly LinkedIn တို့.
Dave Kerpen - CEO ဖြစ်သူ Likeable Local, Author, Speaker ။ @DaveKerpen
Stephanie Sammons - တည်ထောင်သူ ဝါယာကြိုးအကြံပေး™, နာယက။ @StephSammons LinkedIn တို့.
David Meerman Scott - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာ၊ နာယက၊ စာရေးသူ။ @dmscott LinkedIn တို့.
Jason Miller - Sr. Manager၊ အကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ LinkedIn စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖြေများ။ @JasonMillerCA LinkedIn တို့.
Lee Odden, မှာအမှုဆောင်အရာရှိချုပ် TopRank အွန်လိုင်းစျေးကွက်စာရေးသူ၊ @leeodden LinkedIn တို့.
ဂျိုး Pulizzi - တည်ထောင်သူမှာ အကြောင်းအရာစျေးကွက် Institute ကစာရေးသူ၊ @JoePulizzi LinkedIn တို့.
Viveka Von ရို - LinkedIn ကျွမ်းကျင်သူ၊ စာရေးသူ။ @LinkedInExpert LinkedIn တို့.
Neal Schaffer - စာရေးသူ၊ @NealSchaffer LinkedIn တို့.
ကိုကို Sexton - LinkedIn ရှိ Global Sr ။ Marketing Manager ။ @kokasexton LinkedIn တို့.
Mike Stelzner - တည်ထောင်သူ လူမှုမီဒီယာစစ်ဆေးတဲ့, စာရေးသူ။ @Mike_Stelzner LinkedIn တို့.
Todd Wheatland Kelly Services မှ Marketing of VP၊ Author, Speaker ။ @ToddWheatland LinkedIn တို့.
Tags: အမ်း Handleybarry feldmanဘရိုင်ယန် Carter ကဘရိုင်ယန် Clark ကDave kerpenDavid Meerman Scottဟိုင်ဒီ cohenJason KeathJason Millerဂျေးဗာဂျက်ဖ် Bullasဂျိုး Pulizzikoka sextonLee OddenlinkedinMatt heinzMichael Brennerမိုက်ကယ် BritoNeal Schaffernichole ကယ်လီstephanie Sammonsစတီဗင် farnsworthtodd wheatlandထိပ်တန်းလူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူများviveka ဗွန်ရို
27:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 58
27:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 42
ကြီးမြတ်စာရင်း! သေချာတာပေါ့, ဒီအကောင်းဆုံးရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။
27:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 10, 47
ဒီဇင်ဘာ 24, 2014 မှာ 5: 30 AM
အထက်ပါဆောင်းပါး၌ဆိုရှယ်မီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နိဒါန်းအချို့ကိုသင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဲဒီအကြောင်းပြချက်များအတွက်ငါကျိန်းသေသင်၏ eBook download လုပ်ပါလိမ့်မယ်! သင်အမှန်တကယ်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည့်လူစာရင်းကိုသင်တင်ပြပြီးသောအရာတစ်ခု။